မိုးခေါင်ရေရှားဒေသမှ အော်သံများ: 2012
တဖျစ်ဖျစ်မြည်နေတဲ့ မီးတောက်တွေနဲ့ အိပ်မက်သေတွေကို ဖွာရှိုက်နေတဲ့ကမ္ဘာ
Posted by မောင်ရေချမ်း at 12:06 AM 1 comment: Links to this post
စိတ်အေးလက်အေး နာကျင်ညစ်ညူးစရာတွေ နာနာကျင်ကျင်
ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် အာပေါင်အာရင်းသန်သန်နဲ့ လျက်ဆားရောင်းနေတယ်
ခင်ဗျားစိတ်မရှည်ရင် အချိန်တွေကို ရီမုနှိပ်လို့ကျော်ပစ်ပေါ့
ဘာဘာညာညာတွေ သီချင်းတစ်ပုဒ်ထဲက စာသားတစ်ပိုင်းတစ်စလို
အခုလာပြီး အာရွှီး လာပြီး ( ညာပြီး/လာပြီး ) အာရွှီးနေတုန်း
အရင်းမရှိလို့ လူရင်းစားတာ ဘာဖြစ်သေးလဲ
၀ဲပစ်ပါ... ခေါက်ထားပါ .. ပုံပြင်အသစ်တွေကို နားစွင့်ပါ/နားဆင်ပါ
မြွှေအလမ္မာယ်ဆရာတွေ မျက်လှည့်ပြတာ ထူးဆန်းတာမှမဟုတ်
ဂျစ်ဂျစ်ဂျစ် မြည်တတ်တဲ့ရေဒီယိုကိုဖွင့်လို့ နေထိုင်နေရ
မသိမသာ သိသိသာသာပဲ့ပဲ့သွားတဲ့ အနာတရတွေ နက်နက်ရှရှ
ပျော်စရာ ရွှင်စရာ ဟာသကမ္ဘာကြီးကို
တဟီးဟီး ..တဟားဟား ရယ်မောပါ (စိတ်ပျက်စရာ)
မနေ့က/ယနေ့ ဖြစ်ပေါ်သမျှ အခြေအနေအရပ်ရပ်သည် စသည် စသည်။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 3:18 AM3comments:
လူတွေက လမ်းလေးကို မွေးဖွားခဲ့ကြ
သေနတ်၊ဓား လက်နက်မှန်သမျှ ယူဆောင်ခွင့်မရှိ
မီးခြစ် ၊ မီး
လောင်ကျွမ်းစေတဲ့ အရာမှန်သမျှ ယူဆောင်ခွင့်မရှိ
ဒေါသ ၊ အမုန်း
ပေါက်ကွဲစေတဲ့ အရာမှန်သမျှ ယူဆောင်ခွင့်မရှိ
တကယ့်ကို ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 10:33 PM 1 comment:
တောက်တစ်ချက်မှာ ကဗျာတွေ လျှံဝေကျ
ဘီလူးတွေ အသားစားတာ ထူးဆန်းတာမှမဟုတ်
မနက်ဖြန်မှာ နိုးဖို့သံပတ်ပေးထားတဲ့ နှိုးစက်လေးပျက်နေပါပြီ
ဒီခေါင်းစဉ်ကို အခါခါ ပြင်ကြည့်/ဖျက်ကြည့်တော့
"နောက်တစ်ခန်း ..မျှော် " တဲ့ ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 8:35 PM 1 comment:
အော် ကျယ် အော် ကျယ် ...
ဒို ရေ မီ မပီတဲ့ပါးစပ်ပေါက်လေးတွေနဲ့ သီချင်းဆိုနေကြ
လမ်းတွေက လျှောက်လာတဲ့ခြေထောက်တွေကို ပြန်သနားတယ်
ဖတ်နေကျ ဂျာနယ်တစ်စောင်ကို ခေါက်သိမ်းလိုက်တယ်
အဖြစ်အပျက်က ဒါပါပဲ ။
ကြားနေကျ အသံတွေ နားထဲမှာ ဒူ ဝေ ဝေ ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 10:25 PM2comments:
ပွယောင်းယောင်းရယ်သံတွေ ၊ အိပ်မက်ကို စီးနင်းသွားခဲ့
ကိုယ် ဘယ်လိုမှ ပြန်မထနိုင်တော့ဘူး
( အရာရာ အသံမဲ့တိတ်ဆိတ် )
တစ်လှေလုံးမမှောက်ဘဲ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း မှောက်ခဲ့တာ
အဲဒီလိုကောင်ဟာ တစ်ယောက်တည်း ကိုယ့်အိပ်မက်ကိုဆက်မက်ရင်း
ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် ညထဲကို ဒရွတ်တိုက်ဆွဲချသွားခဲ့ပေါ့ ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 1:06 AM5comments:
မှုန်ပြပြ အရိပ်လေးဟာဝေးသထက် ဝေး..
ကိုယ့်ကို ဒဏ်ရာမြစ်ထဲ ရဲရင့်စွာပစ်ချခဲ့ပါတော့ကွယ် ၊၊
လေအဝေ့မှာ ယိမ်းနွဲ့လှပခဲ့ဖူးတဲ့ ဆံနွယ်စတွေကိုသတိရလို့
အခုတော့ ... ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း
တကယ့်ကို ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းပါ ၊၊
( Hello အနုပညာဂျာနယ် ၊Vol,3 .Issue 57 )
Posted by မောင်ရေချမ်း at 11:34 PM3comments:
မီးညွှန့်တွေ တစ်စစ ဖူးပွင့်ဝေခဲ့တယ်။
တေလေဖူးတဲ့ မမှည့်သေး အသီးတွေကလည်း
အကွေ့အကောက် တန်းမညီစွာ ကြွေကျ
မလှပမှုဟာ အမြစ်ကို စုန်ဆန်ရင်း
Posted by မောင်ရေချမ်း at 7:06 AM2comments:
သေကွဲ ရှင်ကွဲထက်ဆိုးတဲ့ အချိန်တွေကျကွဲခြင်းမျိုး
နှုတ်ခမ်းတွေ ပြတ်ထွက်လုမှုတ်နေတာ ဘာမီးမှမတောက်ခဲ့ဘူး
တစ်နေ့တစ်နေ့ကို မျှော်ရင်း တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့သေဆုံး
နဖူးက ချွေးတွေခြေမအထိ မြှုပ်ခဲ့ကြ
ကောင်းကင်နဲ့ဝေးနေကြတဲ့ ...အိပ်မက်တွေ ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 12:53 AM 1 comment:
ခန္ဓာကိုယ်အဟောင်းနဲ့လူတွေ အင်္ကျီအသစ်ဝတ်ပြီးလှချင်ယောင်ဆောင်နေတဲ့မြို့
( ခရုကောင်လေးတွေလိုပဲ ) တရွေ့ရွေ့နဲ့သွားနေကြ
ကျူးကျူးကျော်ကျော်တွေလည်း ကျူးကျူးကျော်ကျော် လွန်လွန်ကျူးကျူး
ကြောက်စရာမြေကြီးမှာ အကြောက်တရားတွေ သီး သီး လာ
ကောက်လိမ်တွန့်ကွေးခဲ့ ..... ညတွေ
နီရိုးဘုရင်ကြီး ခုထိတယောထိုးနေတုန်း ( ဒါ ရောမလို / ကျရှုံးခါနီး ပါရီလို )
ဒီဒေသမှာ မိုးတစ်စက်မှ မရွာတော့ဘူး ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 10:53 PM 1 comment:
၀ှစ်ခနဲ ၊ ၀ှီးခနဲ မြန်ဆန်လာတယ်
မနေ့ကအလုပ်တွေကို ဒီနေ့မှ နှစ်ရက်စာပေါင်းလုပ်နေရရှာတဲ့မြို့
အဲဒီ့မြို့ကြီးကို သူတိတ်တိတ်လေး လွမ်းနေတယ်
မရယ်ကြပါနဲ့ ကျေးဇူးပြုပြီး မရယ်ကြပါနဲ့
ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ.........ရေ.........ရေ..........ရေငတ်လာတယ် (သူရေငတ်လာတယ်)
ကဗျာဆရာဟာ သူများနိုင်ငံမှာ ကိုယ့်နိုင်ငံအကြောင်းကဗျာတွေရေးရင်း
မနက်မနက်ဆို ဖိုသီဖက်သီထတယ်/အလုပ် လုပ်တယ်/အွန်လိုင်းတက်တယ်
တစ်နေ့တစ်နေ့ မြန်မာပြည်မြေပုံကို ကြည့်တယ်
မိသားစုတွေ နေကောင်း ကျန်းမာစေကြောင်းဆုတောင်းတယ်
သူ့ရင်ဘတ်သူချိုးပြီး သူ့လက်ဖျံရိုးပေါ်မှာ သူပွင့်ခဲ့တယ်
ကွာလာလမ်ပူတဲ့ ၊စင်ကာပူတဲ့ ၊ ဒူဘိုင်းတဲ့
Posted by မောင်ရေချမ်း at 10:34 PM 1 comment:
Labels: ကဗျာ, အက္ခရာလမ်းကဗျာအရေးအသား
ပန်းချီကားထဲက ထွက်မလာသေး။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 4:06 AM2comments:
ပန်းမပွင့်တဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာ ငါတို့ဟာ ပစ်စလက်ခတ်အသက်ရှူ
သက်ပြင်းတွေကို စီးကရက်ငွေ့တွေလို မှုတ်ထုတ်ရင်း
အားလုံးကို အစကပြန်စမယ်ဆိုတဲ့စကားအဟောင်းကြီးကို ခေါက်ထားလိုက်
တချို့က လေထဲမှာ ပျောက်သွားတဲ့ ၀တ်မှုန်နုနုတွေ
တချို့က အိပ်ဝေးသီချင်းကိုမဆိုချင်ဘဲ ဆိုလို့
တချို့က အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ထဲက အသားစတွေလို
ငါတို့လူငယ်ဘ၀ဟာ ဘယ်ခဲဖျက်နဲ့မှဖျက်မရတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 11:35 PM 1 comment:
လက်နက်တွေက သကြားလုံးတွေလို ခပ်ပေါပေါဖြစ်လို့
အစာရေစာ ပေးပါ ( အစာရေစာပေးပါ………အစာရေစာပေးပါ )
Posted by မောင်ရေချမ်း at 11:10 PM2comments:
ပြောတော့ ဆင်ဖမ်းမယ် ကျားဖမ်းမယ်နဲ့ ပြီးတော့ မျှစ်ချိုးပြီး ပြန်လာခဲ့တာ
ခေတ် ခေတ် ခေတ်နဲ့ တခစ်ခစ်ရယ်သံတွေကြားထဲမှာ
ကိုယ်နဲ့မတော်နဲ့ဦးထုပ်ကြီးဆောင်းပြီး ခပ်တည်တည်နဲ့ တည်တည်တံ့တံ့( ခံ့ခံ့ )စကားတွေပြောလို့
နားအေးပါးအေး ၊ အားလုံးဟာ ညာတာပါတေးနဲ့
Posted by မောင်ရေချမ်း at 1:03 AM3comments:
မှုတ်ထုတ်လိုက်တယ် ခေါက်ရိုးကျိုးသံသယတွေ တငွေ့ငွေ့
( ဆုံး ရှုံး ) ၊ အကျအဆုံးများတဲ့စနစ်တကျ လွဲချော်မှုတွေ တရိပ်ရိပ်
ရိတ်သိမ်းပြီးစီးခွင့်မရတဲ့ လျှောက်နေကျလမ်းတွေ တငွေ့ငွေ့
အဲဒီ့လမ်းတွေမှာ တံလျှပ်တွေ တရိပ်ရိပ်လူးလွင့်ထလို့
လူတွေက လမ်းတွေကို မလျှောက်ဘဲ ( လမ်းတွေက လူတွေကိုပြန်လျှောက်သွားခဲ့)
ဟူးခနဲ၊ဟင်းခနဲ အသံတွေ မိုးထိအောင် လွင့်ပျံ့ညံသွားတယ်
ဒုန်း ၊ ဒိန်း ဆူညံသွားခဲ့ပြန်တယ် ( သံသယတွေ အင်တိုက်အားတိုက် )
သေနက်ကို မိုးပေါ်ထောင်ပစ်ပြီး အော်ဟစ်ပစ်ချင်တယ်
"လူတွေ မသတ်ကြပါနဲ့ ၊ စစ်ပွဲတွေ ရပ်ပေး "
Posted by မောင်ရေချမ်း at 12:05 AM 1 comment:
ဒီလို သက်သက်နဲ့ပဲ ပေစုတ်စုတ်နေထိုင်တတ်ခဲ့
ဒီလို သက်သက်နဲ့ပဲ သိပ်ဂွကျတဲ့ကောင်ဖြစ်လာခဲ့
“သေခြင်းတရားဟာ အသံမထွက်ဘဲ တိတ်တိတ်လေးပဲ”
Posted by မောင်ရေချမ်း at 1:02 AM 1 comment:
ဒါနဲ့ပဲ မိုးပြိုမှာကြောက်လို့ ခြေထောက်နဲ့ကန်ထားတယ်
ဘာမှထူးလှတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး (မိုးက ပြိုပြီးသားပဲ )
လွမ်းရင်း လွမ်းရင်း တဖြည်းဖြည်းလေလွင့်လာ
Posted by မောင်ရေချမ်း at 4:08 AM No comments:
တိတ်တိတ်လေး ခိုးခိုးရေးမိတဲ့ ကဗျာ
ခိုးနေတဲ့အကြောင်းတွေပဲ ခိုးခိုးပြီး တွေးနေမိ
ခိုးနေကျ သူခိုးတွေကတော့ ခိုးရေးထားတဲ့ဒီကဗျာကို ဖတ်ကြမှာမဟုတ်ကြ
လူတွေ ခိုး ခိုးပြီး ခိုးခိုး၍ သယ်ယူပို့ဆောင်ခံရ
Posted by မောင်ရေချမ်း at 8:32 PM No comments:
ဒါ ခေတ်နာကံနာပဲ။ရက်ရက်စက်စက်အသေအပျောက်များတဲ့နာရီတွေထဲမှာ အမှောင်ကိုဖက်ပြီးအိပ်နေကြရတာ
ဒါ ခေတ်နာကံနာပဲ။ထပ်ခါထပ်ခါ ပုံပြင်ဟောင်းတွေထဲမှာ ငါတို့ငိုယိုနေရတာ
ဒါ ခေတ်နာကံနာပဲ။တခြားလူတွေက ငါတို့လူတွေကို ဈေးဆစ်ပြီးဝယ်သွားကြတာ
ဒါ ခေတ်နာကံနာပဲ။ အစွယ်အသွားတွေနဲ့ လှောင်ပြောင်ရယ်မောပြတာ ခံနေရတာ
Posted by မောင်ရေချမ်း at 12:11 AM No comments:
သက်ပြင်းသံ ၊ တောက်ခေါက်သံတွေနဲ့ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ
ကြည့်လေရာ မြင်လေတိုင်း မီးမြားတွေကြားမှာ
မျှော်လင့်သမျှတွေ ဖွာခနဲ ဖွေးခနဲ
အားလုံးဟာ လွင့်စင်ပေါက်ကွဲခါနီး အနေအထားနဲ့ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ
အဲဒီ့အနေအထားနဲ့ ငါတို့အားလုံးဟာ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ
ကမ္ဘာကြီးဟာ ဒုက္ခတစ်ထပ် ဒေါသတစ်ထပ်နဲ့
မတရားမှုတွေ ရှူရှူသွင်းရင်း တဖြညိးဖြည်း ၀ ၀ လာ ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 12:17 AM No comments:
ချိုင့်တွေ ၊ခွက်တွေနဲ့ ညှိုးရော်ကြမ်းတမ်းနေတာ
Posted by မောင်ရေချမ်း at 12:13 AM4comments:
ဘာမှ မစိုက်ရသေး/မပွင့်သေးတဲ့ ဥယျာဉ်
တစ်ယောက်က မီးညှိဖွာရှိုက်ရုံ သက်သက်ပဲတတ်နိုင်ကြတယ်
Posted by မောင်ရေချမ်း at 9:55 PM2comments:
မင်းအရိပ်လေးဟာ တရွေ့ရွေ့ တဖြည်းဖြည်း
` ခွဲရတော့မယ် ၊ ဝေးရတော့မယ် ´
မထူးလက်စနဲ့ ... ခုတ်ဖြတ်ချလိုက်ပါတော့ ၊၊
Posted by မောင်ရေချမ်း at 5:21 AM No comments:
ကိုယ်ဟာ စိတ်ပျက်စရာလူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း ကိုယ့်အိပ်မက်များနဲ့တကွ
Posted by မောင်ရေချမ်း at 2:13 AM3comments:
တဖြည်းဖြည်း ဝေး သထက် ဝေး
ဘူးပင်က ဖရုံသီး သီးလာသလို မယုံနိုင်စရာတွေ
အားလုံးဟာ အလွမ်းဇာတ်ထဲ ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 2:51 AM2comments:
ကျွန်တော် ဘာတစ်ခုမှ မသိခဲ့သောအချစ်အကြောင်းများ
သူမသည် ပန်းနုရောင်ယှက်ပြေးနေသော ဆည်းဆာလှလှ တစ်ထည်ခဲ့ဖူး၊၊သူမသည် ၀တ်မှုန် ချိုအီအီတို့ဖြင့် ထုံလွှမ်းအပ်သော ပျော့အိအိ ပန်းပွင့်တစ်ပွင့်ဖြစ်ခဲ့ဖူး၊၊ ကျွန်တော်သည် ထိုပန်းပွင့်အတွင်း သိမ်မွေ့လှပစွာ ခုန်ဆင်းချင်ခဲ့သော ပိုးကောင်ငယ်လေးတစ်ကောင်ဖြစ်ခဲ့ဖူး။ ပန်းရောင်ဖျော့ဖျော့ဆည်းဆာ(သူမ)ကို ရီငေးကြည့်ငေးရင်း အချိန်ပေါင်းများစွာ ကုန်လွန်စေခဲ့ဖူး ။ အချိန်တို့သည် အချစ်တို့ကိုတိုက်စားသွားတတ်ကြောင်း မည်သူကပြောပြော၊ကျွန်တော်လက်ခံမည် မဟုတ်။ အချစ်သည်သံယောဇဉ်နှင့်လည်းကောင်း ၊ ညင်သာနူးညံ့မေတ္တာတရားနှင့်လည်းကောင်း တိုက်ရိုက်အချိုးကျပါသည်ဟု ကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်သီအိုရီထုတ်ထားမိပါသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူမ(သို့မဟုတ်)ကျွန်တော့်အိပ်မက်၏ရင်ခုန်ခြင်းများနှင့်ပတ်သတ်၍ ဘာတစ်ခုမှမသိခဲ့ကြောင်း ကျွန်တော်ရိုးသားစွာ ၀န်ခံပါမည်။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 9:30 PM6comments:
Posted by မောင်ရေချမ်း at 6:55 AM 1 comment:
ခင်ဗျားမှာ ဇ ရှိရင် သူတိုနဲ့ တစ်ပွဲတစ်လမ်း ဖဲရိုက်ကြည့်
ဘီလူးတွေပီပီ သမုဒ္ဒရာကိုလည်း လက်ပစ်ကူးနေတဲ့သတ္တ၀ါတွေ
ဘ၀ထိုးရင် ဘ၀လျှော်မယ်ဆိုတဲ့ တော်ကီမှာမျောရင်း
အိပ်မက်ထိုးပြီး အိပ်မက်ပြန်မရသူတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေး
"မည်သို့ ပြုလုပ်လိုက်သည် မသိ "
"မည်သို့ ပြုလုပ်လိုက်သည် မသိ"
အားလုံးဟာ ရင်သပ်ရှုမော ( အထိတ်တလန့်နဲ့ )
Posted by မောင်ရေချမ်း at 6:05 AM2comments:
နေ့စဉ်တွေ့မြင်နေကျ ဒီအသံတွေဟာ ဒီအတိုင်းနဲ့ပဲ
ဖြစ်တည်မှုတွေဟာ ပြန်မရတော့တဲ့မြစ်ထဲမှာ စုန်းစုန်းမြုပ်လို့
အတိတ်တွေကို ပြန်တွေးမိတိုင်း အလွမ်းတွေဟာ နာဖျားနေ
နေ့စဉ်တွေ့မြင်နေကျ ဒီအသံတွေဟာ ဒီအတိုင်းပဲ ၊၊ ၊၊
Posted by မောင်ရေချမ်း at 3:44 AM2comments:
ကြောင်တောင်တောင် လူတစ်ယောက်ဟာ သူ့စိတ်သူ ကြောင်တစ်ယောက်လို ကုတ်ခြစ်
အရေးမကြီးသလိုလိုပဲ အသိတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တယ် ဘီယာမူးနေတဲ့အိပ်မက်ကို သူ့ကပဲ လမ်းတစ်ဝက်မှာလုယူသွားတယ်
ဒါနဲ့ပဲ ဖိနပ်အတုတစ်ရံကိုစီးပြီး လမ်းအတုမှာလျှောက်နေတဲ့လူအတုတွေကို ငေးကြည့်တယ်
ဒါနဲ့ပဲ သူ့ကိုယ်သူ သူတော်ကောင်းလို့ပြောတဲ့လူကို အရက်ဝယ်တိုက်လိုက်တယ်
ဒါနဲ့ပဲ ကော့လန်လွန့်ကွေးနေတဲ့ ဟိုဟိုဒီဒီပုံလေးတွေ ကြည့်တယ်
ဒါနဲ့ပဲ ဟိုတစ်ကွက် ဒီတစ်ကွက် ပိတ်ကားထက်ဆိုတဲ့ သီချင်းကိုဆိုမိတယ်
ဘာမှမဟုတ်ဘူး ထူးထူးခြားခြား မနေ့ညကလည်း မိန်းမနဲ့ရန်ဖြစ်တယ်
ဘာမှမဟုတ်ဘူး ထူးထူးဆန်းဆန်း သတင်းတွေမနေ့က သတင်းစာမှာပါလာခဲ့တယ်
သတင်းစာမှာ မှန်တာနာရေးသတင်းပဲရှိတယ်ဆိုလား ဘာလား ညာလား
ညာလား လိမ်လားတော့မသိဘူး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပိုက်ဆံချေးသွားတယ်
နေ့လည်ဆို ထမင်းစားချင်ယောင်ဆောင် ၊ ညညဆို အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်လို့
ဖလန်း ဖလန်းထနေတဲ့စိတ်ကူးတွေကို ရိုက်ရိုက်ချရင်း
ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် အရိုးနွှာကြည့်တယ် ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူး
၂၄ နာရီဖွင့်တဲ့လမ်းပေါ်မှာ လျှောက်နေတာပဲ
ဓားကို ပျားရည်လိုမျိုမျိုချရင်း ကတိစကားတွေကိုလွယ်လွယ်ယုံခဲ့ကြတယ်
ဒီနေ့ထုတ်သတင်းစာလေးဟာ ဘုတ် ခနဲ ပြတင်းပေါက်ကနေ ၀င်လာခဲ့
အဲဒီ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်ဟာ .................
လို မျိုး ....ဖြစ်သွား
ဒီလိုမျိုး.................ဖြစ်..... သွား..........။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 1:07 AM6comments:
အစာလို ရေလို နေရောင်ခြည်လို အမြဲမပြတ်မှီဝဲခဲ့ပါတယ်
ချစ်သူတစ်ယောက်ကို ချစ်သလိုလည်း ချစ်မြတ်ခဲ့ပါတယ်
ကိုယ့်အရိုးကိုယ်ခြစ်ပြီး ကမ္ဘာကိုချစ်လို့ရေးတယ်လို့လည်း ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်စကားကို
(အကျယ်ကြီး ၊ အကျယ်ကြီး ) ဘယ်တုန်းကမှဟစ်အော်မပြောခဲ့ပါဘူး
ကမ္ဘာကြီးရဲ့ခြေကြားလက်ကြားကနေ လျှောခနဲ ၊လျှောခနဲ ထွက်ကျသွားမှုတွေ
Posted by မောင်ရေချမ်း at 11:27 PM4comments:
နာရီပေါင်းများစွာ ၊ အချိန်ပေါင်းများစွာ
ဖြစ်တည်မှုတွေ တမြေ့မြေ့ပါး ပါးလာ
ဒီဒဏ်ရာတွေဟာ သွေးမတိတ်တော့ဘူး ၊၊ ၊၊
Posted by မောင်ရေချမ်း at 2:35 AM2comments:
လမ်းအတုများ ၊ နာရီအသေများ
လမ်းတွေ ၊ လူတွေဟာ လွန့်လူးလှုပ်ရှားရင်း
ဒီရပ်ဝန်းလေးတစ်ခုလုံးဟာ အောက်စီဂျင် ငတ် မွတ်
Posted by မောင်ရေချမ်း at 1:11 AM2comments:
ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ ကြိယာပုဒ်ကို ( အချစ်ကို ) နတ်ဘုရားတစ်ပါးလို
သူ့ကို အဲဒီ့နတ်ဘုရားရဲ့တစ်ပါးတည်းသော သမီးတော်တစ်ပါးလို ညွှတ်ကျိုးကိုးကွယ်ခဲ့ပြီးပြီပဲ
ဝေမှုန်ကြဲလွင့်လို့ တကယ့်ကိုကြေကြေကွဲကွဲ ၊ မျက်ရည်မရှိဘဲ ငိုတတ်ခဲ့တဲ့ကောင်
တခုတ်တရတမ်းတလို့ လင်းဝေစိမ်းမြတဲ့ညတွေမှာ အိပ်မရတဲ့ကောင်
ငါဟာ ငါတစ်ယောက်တည်းပြိုင်တဲ့ကစားပွဲမှာ အလျော်မရခဲ့တဲ့ကောင်
အမှောင်တွေကို တစ်ကိုက်ပြီးတစ်ကိုက် မျိုဝါးဖဲ့ခြွေရင်း နစ်မြှုပ်နေတဲ့ကောင်
ငါ့ဖြစ်တည်မှုဟာ ယစ်ပလ္လလင်ထက်မှာ ၊ စိုလဲ့ထက်မြတဲ့ဓားသွားတစ်လက်ပေါ်မှာ
(ဟေး........ငါ့အိပ်မက်တွေရေ ) ငါ့ဝိညာဉ်ကို ဆောင်ယူပါ
အလင်းပွင့်တွေ ဖွာကြဲလွင့်စင်လို့ ငါ့စိတ်ကိုသူ့စိတ်ဆီပိုိ့ပေးပါ ၊ ငါ့အိပ်မက်နဲ့ သူ့ညတွေ ၀တ်မှုန်ကူးပေးပါ
သံယောဇဉ်မြစ်ကိုမှ အလျားလိုက်ဖြတ်ကူးချင်သူကို ဘယ်ကံကြမ္မာကမှ မသနားဘူး
အချစ်ဆိုတာလည်း အခုစိုက်၊ အခုပေါက်တဲ့သစ်ပင်မဟုတ်တော့ ခက်သား
အိပ်မက်တွေ မျက်ရည်တွေသာ နှလုံးသားရဲ့ဘာသာစကားဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အဲဒီလိုနဲ့ပဲ ငါဟာ လှပစွာကျရှုံးတာပဲ ၊
Every night in my dream , I see you . I feel you. ဟေး.......သွားစမ်းပါကွာ အဲဒီ့သီချင်းကိုပိတ်လိုက်
တစ်ခါတစ်လေမှာ စကားတွေထစ်အလို့ တစ်ခါတစ်လေမှာ စကားလုံးတွေပျောက်ရှအက်ကွဲလို့
ချောင်းဆိုး ၊နှာချေတာအထိငါအစိုးရိမ်ဆုံးပဲ ၊၊ မျက်တောင်ဖျားက ခြေဖ၀ါးထိ ( သူဟာဖတ်ရခက်တဲ့ကဗျာ)
ငါ့အတွက်မီးတောက်တွေဆိုရင်တောင် ညင်သာနူးညံ့စွာ လောက်ကျွမ်းပစ်ဖို့ ၀န်မလေးခဲ့ဘူး
စီးကရက်သောက်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေသည်က အစ
တစ်ခါ တစ်ခါ ငါ့ကဗျာတွေ ငါ့ကဗျာတွေအထိ ညှိုးရော်နာခံလို့ တစ်ဘ၀လုံး သူ့ရနံ့တွေ ......ဖုံး၊၊ ၊၊
Posted by မောင်ရေချမ်း at 9:47 PM2comments:
ရွှေအမြုတေမဂ္ဂဇင်း One minute interview
အချစ် ကဗျာတွေ ရေးပြီး ဂျာနယ် စာမျက်နှာများပေါ် ရောက်ခဲ့ပေမဲ့ ရန်ကုန် ကဗျာနဲ့မှ မဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာ ပေါ်ရောက်ခဲ့တဲ့ ကဗျာဆရာ မောင်ရေချမ်းက ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွက် ရွှေအမြုတေ စာပေဆုကဗျာ ဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ယုံကြည်ရာကို ရိုးရိုးရဲရဲ ရေးထားတဲ့ ရန်ကုန် ကဗျာနဲ့ ဆုရတာကြောင့် ၀မ်းသာပီတိ ဖြစ်တယ်လို့ မောင်ရေချမ်းက ဆိုပါတယ်။
ရန်ကုန် ကဗျာကို teen မဂ္ဂဇင်းကို ဘယ်လိုကြောင့် ပို့ဖြစ်ခဲ့တာလဲ။
ကျွန်တော်က လူငယ်စစ်စစ်ဖြစ်လို့ teen မဂ္ဂဇင်းကို ပို့ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ရန်ကုန် ကဗျာကို ရေးတဲ့အခါ ကိုယ်တိုင် မြင်တွေ့ ရမှုတွေကိုပဲ ရေးချဖြစ်တာလား၊ တခြား သူတွေ
Posted by မောင်ရေချမ်း at 8:57 PM4comments:
ငါတို့ဟာ ကိုယ့်သီချင်းကိုယ်ရဲရဲ မဆိုရဲခဲ့ကြ
ငါတို့ဟာ ကိုယ့်အတောင်ကိုယ်တဖျပ်ဖျပ် မြည်အောင်မခတ်ရဲခဲ့ကြ
Posted by မောင်ရေချမ်း at 1:49 AM4comments:
ကိုယ်ဟာ တကယ်တော့ သေအံ့မူးမူးလူတစ်ယောက်ပါ
Posted by မောင်ရေချမ်း at 3:33 AM 1 comment:
ဒီလို ဒီလိုနဲ့ ကြေကြေကွဲကွဲ
ဘ၀တွေ ရွှဲရွှဲစိုအောင် ......အရွာလည်းခံရဖူးပြီ
ဖြစ်တည်မှုတွေ အစားခံရ ၊
ကောင်မလေးရယ် မင်းရဲ့စိတ်ကို ဖြေသိမ့်လိုက်ပါတော့
အိပ်မက်သေတွေ ရုန်းကြွလာအောင် မန်းမှုတ်ဖို့အတွက်
ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် ချော့သိပ်လို့ တိတ်တိတ်လေး အိပ်နေတော့မယ်
ကိုယ်ရယ် ၊ မင်းရယ်
ကမ္ဘာကို မေတ္တာတရားနဲ့နားလည်ဖို့ ကြိုးစားရဦးမယ် ၊၊ ၊၊
Posted by မောင်ရေချမ်း at 4:26 AM3comments:
ဆွဲမိဆွဲကိုင်ရာ နွယ်မြက်တွေဟာ ဓားတွေဖြစ်လာ
ဓား..........တွေ......ဖြစ်........လာ......ခဲ့... ၊၊ ၊၊
Posted by မောင်ရေချမ်း at 11:33 PM2comments:
နှုတ်ခမ်းဝမှာ စီးကရက်မျိုးစုံ ခပ်တည်တည်နဲ့ခဲလို့
ညှီုစို့စို့ရနံ့တွေ ထွက်ကျလာမှာစိုးလို့တဲ့ ၊၊ ၊၊
Posted by မောင်ရေချမ်း at 2:41 AM No comments:
ဒီလိုမျိုးပေါ့ ဖြစ်တည်မှုတွေဟာ ဂျာအေးကိုသူ့အမေရိုက်
နားထဲမှာ ဒီအသံတွေပဲ ကြားနေရတယ်
ရုပ်မြင်သံကြားကိုပိတ်ထားတယ် ၊သတင်းစာတွေကို ပိတ်ထားတယ် ၊
စားပွဲပေါ်မှာ နှင်းဆီဖြူပွင့်တွေဟာ ကျိုးပျက်ကြေမွလို့
ထွက်နေကျ ( ဖတ်နေကျ ) ဂျာနယ်တွေထဲက ညိုပုပ်ပုပ်အနံ့တွေထောင်းထောင်းထ ၊
သွေးနံ့ ၊ချွေးနံ့ ယမ်းနံ့တွေပဲ၊၊တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်က ၊ တစ်ယောက်ကတစ်ယောက်ကို မမြင်ကြဘူး ၊
မြင်သမျှဓားတွေ ၊မီးတောက်တွေ ၊၊
Posted by မောင်ရေချမ်း at 11:29 PM 1 comment:
(၂) အစိုးရတယ်ဆိုတာလည်း အစိုးမရဘူး
ဖြစ်တည်မှုတွေက ပိန်းကြာရွက်ပေါ်က ရေစက်တွေလို
အချိန်မရွေးလျှောခနဲ ၊လျှောခနဲ ကျသွားနိုင်တယ်
(၃) အဆိုးတွေပဲ ရနေတာ (တကယ့် အဆိုးတွေပဲ)
နောက်တော့လည်း ညိုပုပ်ပုပ်ရေတွေ ဒလဟော
( Hello အနုပညာဂျာနယ် ၊Vol,3 .Issue 42 )
Posted by မောင်ရေချမ်း at 9:09 AM 1 comment:
ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ပိုစကာတွေကပ်လို့ တကယ့်ကိုခမ်းခမ်းနားနား ၊ အိပ်မက်သေတွေကို နှုတ်ခမ်းဝတွေမှာကပိုကယိုချိတ်ဆွဲထား တယ်၊၊၊တကယ့်ကိုခပ်လန်းလန်းလေးပဲ ၊၊သူတို့ ဘာလုပ်နေလဲ ၊သူတို့ဘာလုပ်နေလဲ ၊ကဲ...ကဲ ကျွန်တော်တို့သိချင်နေကြတယ် ၊၊
ဒီအိမ်လေးကခေါင်မိုးလုံရဲ့လားဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်လေးတွေ သိသိသာသာဖိစီးလို့ ၊၊အချစ်ရေ...နေလို့မှကောင်းရဲ့ဆိုတဲ့သီချင်းစာသားကို
အသံကြောင်ကြီးတွေနဲ့အဝေးကနေ ဟစ်အော်နေသူတွေရှိတယ် ၊၊ထူးခြားတာပဲ ၊ဒီနေရာမှာမှ ကွက်လို့မိုးခေါင်နေတာ ၊၊ဒီလမ်း ၊ဒီခရီး
သွားချင်ရဲ့လား ၊ ဒီလိုသွားနေသမျှဒီကို မရောက်ဘူး ယုံ၊၊(ဒီ...ဒီ...ဒီ...)၊၊ မျက်လုံးမပါတဲ့လူတွေကအရောင်တွေရဲ့သဘောတရားအကြောင်းကို တခမ်းတနားပြောကြမယ်၊၊
မသူတော်တွေကို မသူတော်အချင်းချင်းချီးမွှမ်းလို့ ၊ပြန်ပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အိပ်မက်တွေကို အရင်းအတိုင်းပြန်
မရဘူး ၊၊အတိုးပါပေးရမယ်တဲ့ ၊သိပ်ဂွကျတယ်ကွာ ၊၊သတင်းစာလေးကိုင်လို့ ငေးငေးငိုင်ငိုင် ၊၊
ပုပ်ပွပွ ချဉ်စုပ်စုပ်ကိစ္စတွေအကြောင်း တစေ့တစောင်း ၊၊မိုးခါးရေ ၊ တစ်ကျိုက်နှစ်ကျိုက် ၊၊
အံ့သြတာပဲ ၊ ဒီခြေလှမ်းမျိုးနဲ့ အာမခံပက်စက်တယ် ၊၊ဘာဘာညာညာနဲ့ စကားရောဖောရောလုပ်မယ့်အကြောင်းအရာတွေ ၊၊
အကွက်တွေ ဟိုရွေ့၊ဒီရွေ့ ညစ်ကျယ်ကျယ်အပြုံးတွေနဲ့ နောက်ဆုံးမှာ ဒိုင်စားတယ်
ကောင်းကင်ကြီးတစ်ခုလုံးပေါက်ဖြဲနေ ၊ အိပ်မက်ပန်းပွင့်လေးတွေ နွမ်းကြေလို့ ၊၊
ကဲ... ပြောစမ်း ၊ဒီတစ်နေရာတည်း မိုးခေါင်လွန်းတာ ဘယ်သူငြင်းမလဲ ၊၊
Posted by မောင်ရေချမ်း at 4:01 AM No comments:
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ ၊ မနေ့ညက အိပ်မက် မက်တယ်
ရပ်နေတဲ့မြေကြီးဟာ တဖြည်းဖြည်း အက်….အက်…..လာ
မြေမှုန်မြေစတွေ လွင့်ဝဲလို့ တစ်စတစ်စ အာ……အာ….လာ
ပြီးတော့ နှင်းဆီဖြူတွေတစ်ပွင့်ပြီးတစ်ပွင့် ပွင့်
အိပ်မက်ထဲမှာ သေသွားတဲ့လူတွေဟာ ပြန်ရှင်လာလို့
ပျော်ကြ ရွှင်ကြ ကကြ ခုန်ကြ
သူတို့ ကွဲကွာနေခဲ့ကြတာ ကစဉ့်ကလျား
Posted by မောင်ရေချမ်း at 1:32 AM 1 comment:
Posted by မောင်ရေချမ်း at 1:13 AM 1 comment: Links to this post
Posted by မောင်ရေချမ်း at 9:09 PM 1 comment: Links to this post
Posted by မောင်ရေချမ်း at 2:40 AM2comments: Links to this post
Posted by မောင်ရေချမ်း at 5:43 AM No comments: Links to this post
တစ်ခါတစ်ခါ မျိုးစေ့မလိုဘဲ ဖူးပွင့်လာခဲ့
မှုန်ဝေခါးသက်မှုတွေနဲ့ ဟစ်အော် ...တမ်းတ
တကယ့်ကို အိစက်သိမ်မွေ့စွာ ချစ်ခဲ့တာ
ကိုယ် ချစ် ခဲ့ တာ
Posted by မောင်ရေချမ်း at 3:34 AM 1 comment: Links to this post
ဥုံ လို့ မန်းမှုတ်မနေတော့ဘူး
Posted by မောင်ရေချမ်း at 3:55 AM 1 comment: Links to this post
ဒါပေမယ့် စက်ဆုပ်မှုတွေ ၊ရွံ့ရှာမှုတွေတော့ ထူထူထဲထဲ ဝေါ့ ခနဲ ထိုးအန်လာလိမ့်မှာ
Posted by မောင်ရေချမ်း at 12:04 AM3comments: Links to this post
ေ၀၀ါး .....ေ၀၀ါး ....ရှတထုံကျင်လေသောစိတ်များ
၀ိုးတ၀ါးေ၀၀ါး .......နှလုံးသားဟာ ကြွေပျက်အိပ်မက်တွေထက်
အမှောင်တွေ ဟောင်းလောင်းပွင့်လေသော ညများ
အလွမ်းတွေဟာ မတ်စောက်လို့ ချောက်တွေလိုနက်သထက်နက်ခဲ့ ၊၊
Posted by မောင်ရေချမ်း at 10:17 PM 1 comment: Links to this post
“ ဒီလို အဖြစ်မျိုးတွေ တကယ်ရှိလား ”
“ မတရား သက်သက်ခံနေရတာပါ ”
Posted by မောင်ရေချမ်း at 1:53 AM2comments: Links to this post
ကဗျာဟာ ခါး ခါးလာ
တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ တစ်ညထက်တစ်ည ငြိမ်းချမ်းစေကြောင်း
မီးတောက်တွေ ကင်းစင်လို့ ကြွရွလှပနေပါစေတော့
အရာရာဟာ မှုန်ပြဝေရီလို့ အလေအလွင့်ခေတ်ထဲ အလွင့်အလေများတယ်
တစ်ခုခုတော့ တစ်ခုခုပဲတစ်နေရာမှာ လွဲချော်နေတာ
ငေးရင်းလွမ်းရင်း ၊ လွမ်းရင်းငေးရင်းနဲ့ အလေအလွင့်ခေတ်ထဲမှာ
နှလုံးသားသွေးထဲ ၊ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ရင်ဘတ်ထဲ အိပ်မက်ထဲ
“တရားမျှတ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေ ”
Posted by မောင်ရေချမ်း at 10:59 PM2comments: Links to this post
ဆန်တစ်ပြည်ဈေးကလဲ လည်ချောင်းကိုပိတ် ပိတ်ကန်နေတာခံရ
ဒုက္ခတွေက ဈေးပေါလို့ လူဈေးတွေလဲကျကုန်ကြတာ
လူတွေ အိပ်မက်တွေ ဘ၀တွေ မျှော်လင့်ချက်တွေ ရင်ခုန်သံတွေ
ကိုယ်ဟာ ဘာကိုလွမ်းလို့လွမ်းမှန်းမသိလွမ်းနေရ ၊၊ ၊၊
Posted by မောင်ရေချမ်း at 3:18 AM 1 comment: Links to this post
အဓိက မှာချင်တာ တွေ့ရာ မစားနဲ့
ယင်နားစာတွေ ပေါတယ် ၀မ်းပျက်လျှောဖြစ်ဖို့ လွယ်တယ်
ဖိနပ် အဟောင်းတွေ စီးပြီး လမ်းကြီးကြီး လျှောက်သူတွေပေါတယ်
Posted by မောင်ရေချမ်း at 5:25 AM 13 comments: Links to this post
ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကို အရှင်လတ်လတ် မြေမမြုပ်ပဲသတ်ပစ်တာ
ရီပြာထုံထိုင်းလို့ အိပ်မက်ရိုင်းတွေ ကိုက်ခဲကုန်တာ ဒီနေ့
ဝေ မှုန် ကြဲ လွင့်
ပွင့် ကြွေ ညှိုး ရော်
ခါး ကြမ်း ရှ သက်
နှလုံးသားကတော့ အလွမ်းတွေနဲ့ လွင့်ထုံညှို့ဆိုင်းလို့ ၊၊ ၊၊
( Hello အနုပညာ ဂျာနယ်၊Vol.3/Issue46/July/2012)
Posted by မောင်ရေချမ်း at 4:45 AM No comments:
အခုတော့လည်း ဒီဇာတ်လမ်းမှာ သူဟာဇာတ်လိုက်
နောင်တစ်ချိန်စာမျက်နှာပေါ်မှာ မင်နီတွေနဲ့နာမည်ကြီးဦးမှာ ၊၊ ၊၊
Posted by မောင်ရေချမ်း at 3:15 AM No comments: Links to this post
မနက်ဖြန် သို့… မျှော်လင့်ခြင်း
ထူးထူးဆန်းဆန်းကတိတွေလာမပေးနဲ့ ( တကယ်မကြားချင်ဘူး )
တခါတခါ အိပ်မက်တွေက အိပ်မက်တွေလိုပဲကျန်ကျန်ခဲ့တယ်
ရာဇ၀င်ထဲက အနော်ရထာနဲ့ကျန်စစ်သားကို သဘောကျတာ အခုထိပဲ
မကောင်းဘူးလား (လွှတ်ကောင်း )
ကဲ ..ပြောကြပါတော့ ဒီစိတ်ကူးတွေကိုရူးတယ်လို့ပဲ ၊၊ ၊၊
Posted by မောင်ရေချမ်း at 1:56 AM No comments: Links to this post
ပွင့်တချို့ ဝေတချို့ ယုံကြည်ရာတွေ
သံလမ်းအောက်က ဇလီဖားတုံးတွေလို ကန့်လန့်ဖြတ်အနင်းခံရတယ်
တခါတလေ တစ္ဆေအိပ်မက်တွေက အော်ငိုပစ်ချင်လောက်အောင် စိုးကြောက်ရ
တစ်ရက်တစ်ရက် အသက်ရှူပိုကျပ်နေသူတွေ သိပ်များမှာပဲ
ဘာမှကုစားမနိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေ အချိန်တွေကြားမှာ ပက်လက် မှောက်ခုံရင်ခုန်သံတွေ
စီဒီစုတ်တစ်ချပ်လို အ ထစ်နေတဲ့အနာဂတ်တွေရေ
ကိုယ်တို့ဘ၀တွေဟာ ၀တ္ထုစာအုပ်တစ်အုပ်ဆို စလယ်ဆုံးကိုယ်ဘာသာပဲရေးပစ်ချင်တာ ၊၊ ၊၊
Posted by မောင်ရေချမ်း at 12:15 AM 1 comment: Links to this post
ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ကိုခွဲကြည့်မည်ဆိုပါကမမဟူသောအက္ခရာလေးကို တခမ်းတနား ထုထွင်းထားကြောင်း မြင်တွေ့ ရမည် ဖြစ်သည်....၊၊
မျှော်လင့်ချက်တွေ ညှီုစို့ပုပ်သိုးသွားသောနှလုံးသားသည် အိပ်မက်ထဲမှာသူ့ကိုမြင်တော့ပြန်ပြီး လန်းဆန်းလာ တတ်မြဲဖြစ်သည် ၊၊တကယ်တော့ အချစ်ဆိုသည်မှာ ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်နိုင်လှသော ရာသီဥတုလိုသာဖြစ်သည် ၊၊ ခန့်မှန်း၍ ခက်လှပါသည် ၊၊ နမ်းရှိုက်ခွင့်မရှိခဲ့သော ပါးပြင်ကိုလွမ်းနေသူအား မိုက်မဲသူအဖြစ် သတ်မှတ်မည်ဆိုပါက ကျွန်တော်သည်လူမိုက် တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်၊၊သိမ်းထားခွင့်မရ ခဲ့သောမျက်နှာလှလှလေးကိုနှလုံးသားထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားမိသူအားရူးသွပ်သူအဖြစ်ပြောကြမည်ဆိုပါက ကျွန်တော်ရူးခဲ့မိပါသည် ၊၊ဆုပ်ကိုင်ခွင့်မရခဲ့သော လက်ချောင်းသွယ်သွယ်လေးများကို တမ်းတနေမိသူအား အဓိပ္ပါယ်မဲ့သည်ဟုယူဆကြမည်ဆိုပါက ကျွန်တော်အဓိပ္ပါယ်မဲ့စွာရင်ခုန်ခဲ့ပါသည် ၊၊
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ ကျွန်တော့်နှလုံးသားသည် အဝေးအရပ်သို့ လွမ်းတတ်နေခဲ့ပြီဖြစ်သည်၊ နှလုံးသားကို တူးဆွပြီးအတိတ်ကို ပြန်တမ်းတမည်ဆိုပါက ပျော်စရာအတိနှင့်နေ့စွဲများပင်ဖြစ်ခဲ့ပါသည် ၊၊
Posted by မောင်ရေချမ်း at 8:36 PM4comments: Links to this post
ရှင်တို့ ကျွန်မလင်ကို ပြန်ခေါ်ပေး
Posted by မောင်ရေချမ်း at 2:25 AM 1 comment: Links to this post
Posted by မောင်ရေချမ်း at 3:13 AM 1 comment: Links to this post
ဒိုင်စားတယ် ၊နောက်အလှည့်ထပ်မျှော် ၊အိပ်မက်အသစ်တွေခေါ်ခဲ့
( အဲဒါမျိုးပြပစ္စည်းတွေ ၊။ )
တဖြည်းဖြည်း ရွေ့ရွေ့လာ ကျောင်းသင်ရိုးကိုချောင်းကြည့်
တရံရောအခါက မြစ်ကမ်းပါးမှာ အိပ်မက်တွေငုပ်တုပ်ထိုင်နေတယ်
မီးသေသွားတဲ့ ဆေးပေါ့လိပ်မှာ ကိုယ်တို့တွေပါ အငွေ့သေလို့
Posted by မောင်ရေချမ်း at 8:55 PM No comments: Links to this post
မလွမ်းချင်တဲ့ ခုနစ်တွေချည်း ပြန် ပြန်လွမ်းနေမိ
နှလုံးသားက နာကျင်တတ်တော့လည်း အခက်သား
အတိတ်ခါးခါးဟာ ဒဏ်ရာဗလပွနဲ့ ရှ- အက်-ထုံ- ကျင် လို့
အချိန်တွေဟာ တိမ်အုပ်မည်းမည်းတွေလို တစ်သုတ်ပြီးတစ်သုတ်ရှပ်ပြေး
အတောင်ချိုးခံလိုက်ရတဲ့ ငှက်တွေလှောင်ချိုင့်ထဲမှာ သေခဲ့ဖူးပြီ
ကိုယ်တို့ အိပ်မက်တွေ ပုံပြင်ပျက်ထဲမှာ သေခဲ့ဖူးပြီ ၊၊ ၊၊
Posted by မောင်ရေချမ်း at 1:12 AM No comments: Links to this post
အိပ်မက်တွေကို မျှော်ရတာ မုန်းစရာ
နှုတ်ခမ်းစူ မျက်စောင်းထိုးနေတဲ့ဒုက္ခလှလှလေးတွေကို တခုတ်တရနမ်းပွေ့
တကယ်သေချာတယ် ...ဘယ်ဘီလူးမှ မင်းသားခေါင်းဆောင်းလို့
ကဲ....ပက်ပက်စက်စက်လွမ်းကြရအောင် ၊၊ ၊၊
Posted by မောင်ရေချမ်း at 12:44 AM No comments: Links to this post
တဖျစ်ဖျစ်မြည်နေတဲ့ မီးတောက်တွေနဲ့ အိပ်မက်သေတွေကို ...
ကိုယ်ဟာ စိတ်ပျက်စရာလူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း ကိုယ့်အိပ...
ခင်ဗျားမှာ ဇ ရှိရင် သူတိုနဲ့ တစ်ပွဲတစ်လမ်း ဖဲရိုက်...
ကြောင်တောင်တောင် လူတစ်ယောက်ဟာ သူ့စိတ်သူ ကြောင်တစ်ေ...
ဒီလိုမျိုးပေါ့ ဖြစ်တည်မှုတွေဟာ ဂျာအေးကိုသူ့အမေရိုက်...
ဒိုင်စားတယ် ၊နောက်အလှည့်ထပ်မျှော် ၊အိပ်မက်အသစ်တွေေ...